“ဒုက္ခသည်တွေ နေထိုင်ရေး အဆင်ပြေရင် နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှု တိုးအောင် လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်” | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
“ဒုက္ခသည်တွေ နေထိုင်ရေး အဆင်ပြေရင် နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှု တိုးအောင် လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်”
Interview, ပြည်တွင်း သတင်း
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၁၃
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဒုက္ခသည်များအတွက် အကူအညီပေးရန် ဇန်နဝါရီ (၁၅) ရက်နေ့တွင် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိလာသော အီရန်နိုင်ငံ မှသံအမတ်(Hossien Kamalian) ဦးဆောင်သည့် (၁၁) ဦးပါ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရခိုင်နှင့်ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ သွားရောက်ကူညီခဲ့သည်။
၄င်းတို့၏ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အီရန်သံအမတ် Hossien Kamalianအား မြစ်မခ သတင်းမီဒီယာမှ သွားရောက် မေးမြန်းခွင့်ရခဲ့သည်။
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီရန်နိုင်ငံ သံအမတ် Hossien Kamalian
မေး။ ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ရှိတဲ့ ဘေးဒဏ်သင့်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကို အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဘယ်လိုမျုိုး အထောက်အပံ့တွေ ကူညီပေးသွားဖို့ရှိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တကယ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက် ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ အပြောအဆိုအရ သိရတာက ဒီမှာ အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အရာက အဆောက်အဦးတွေ၊ ဒုက္ခသည်တွေ အတွက်နေထိုင်ဖို့ အဆောက်အဦးတွေလိုတယ်။ ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေလိုအပ်တယ်၊ အစားအသောက် လိုအပ်တယ် ဆိုတာကို သိရတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ ရွက်ဖျင်တဲလေးတွေကို ယူဆောင်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒီမှာ မီးဖိုဆောင်သုံးပစ္စည်းတွေလဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ် တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီးတော့ ကူညီနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ဒီမှာ ဖြစ်ပေါ်သွားတာတွေဟာ အီရန်နိုင်ငံရဲ့ ခေါင်းဆောင် ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကော အီရန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးအပေါ်မှာ စိတ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အီရန်နိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင် ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အင်မတန်မှ ရင့်ကျက် နေပြီးသားဖြစ်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီဖို့ အတွက် အင်မတန်မှ အဖွဲ့အစည်းကြီးမားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကျွန်တော်တုိ့ ဆီမှာရှိနေပါတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီတဲ့နေရာမှာ ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံအတွင်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိတာ မဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံရဲ့အပြင်ဘက် အာဖကန်နစ္စတန်တွေမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ မြောက်များစွာသော အတွေအကြုံတွေ ရင့်ကျက်နေပြီး သားဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့သလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေကို ကျွန်တော်တိုနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အကြီးအကဲတွေနဲ့ တွေ့ပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ နောက် ပထမဆုံးလောလောဆယ် ပစ္စည်းအနည်းငယ် ယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကူအညီဆိုတဲ့နေရာမှာ ပစ္စည်းတွေမျိုးဘဲ ကူညီတာမဟုတ်ဘဲ တခြားပုံစံမျိုး ဥပမာ အတွေး အခေါ်တွေ အဲလိုမျိုးအကူအညီတွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ အဲဒါတွေကို ဒီအစိုးရကို အကူအညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးအရေးအခင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်တွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ဒါတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို အကူအညီ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ အီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ လူကြီးပိုင်း တော်တော်များများဟာ အင်မတန်ကိုမှ တကယ်ကို စိတ်ဝင်တစား၊ တကယ်ကို တလေးတစား အနေနဲ့ အရေးတယူလုပ်ပါမယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေ အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်း သွားအောင် ကျွန်တော်တို့တွေလည်း လောလောဆယ်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရ အပါအဝင် ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်အားလုံးကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းလို့ရမယ့်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေပါတယ်။
မေး။ ။ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုးပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါ အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေနဲ့ ဖြေရှင်း လေ့ရှိပါသလဲ?။
ဖြေ။ ။နိုင်ငံတိုင်းမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံဆိုတာ ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလူမျိုးပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ အပေါ်မှာ သူတို့တွေကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လူတွေ သေသေချာချာ အုပ်ချုပ်နိုင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီလူမျိုးစု ပေါင်းစုံ ရှိနေတာဟာ နိုင်ငံအတွက် ကောင်းတဲ့အကျိုး ကို ဖော်ဆောင်ပါတယ်။ အဲသလိုမျိုးမှ မဟုတ်ဘူး ဆိုလိုရှိရင် သေသေချာချာ မအုပ်ချုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီမှာ မျိုးစုံသော ပြသနာတွေ ဟာ ပေါ်ပေါက် လာမှာဖြစ်တယ်။ လက်ရှိ ဒီမှာ ဘယ်လို ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ အဲဒီအတိုင်းဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။ တရားမျှမျှတတနဲ့ ဆက်ဆံရမှာက အဖွဲ့တိုင်း သက်ဆိုင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို တကယ်တမ်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိချင်တယ်ဆိုလိုရှိရင် ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကို စကားပြောမယ်၊ သိမ်းသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါတွေဟာ ရင်းနှီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ ရှိရှိသမျှ လူအားလုံးဟာ လူမျိုးစုံအားလုံးဟာ ဘာဆန္ဒရှိကြလဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီနိုင်ငံကြီးကို တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ တစ်တပ်တစ်အား ပါဝင်ဖို့အတွက်ကို ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။
အဲသလိုလုပ်ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးဟာ၊ တယောက်နဲ့ တယောက် ချစ်ချစ် ခင်ခင် ရှိလာမယ်။ တစ်ဖွဲ့နဲ့ တစ်ဖွဲ့ ရှိလာမယ်။ အားလုံးဟာလည်းဘဲ ဒီနိုင်ငံကြီးကို တိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာလဲ စဉ်းစားပြီးသားပါ။ ဒါဟာ ကျွန်တော်တုိ့ အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အီရန်နိုင်ငံမှာရှ်ိနေတဲ့ အတွေအကြုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ရှိသမျှ နိုင်ငံအားလုံးဟာလည်း ဒီစိတ် အခြေခံရှိမယ် ထင်ပါတယ်။
မေး။ ။ ရခိုင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်စဉ်တွေအပေါ် မြန်မာအစိုးရ ကိုင်တွယ်ပုံကိုကော ဘယ်လိုမြင်မိပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ဒါကိုလုပ်ရမှာက ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာရှိတဲ့ သူတွေကို သေသေချာချာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးဖို့ လုိပါတယ်။ လောလောဆယ် ဒီလိုမျိုးအင်မတန်မှ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးထားရှိတာဟာ လုံးဝ မသင့်ဘူး။ သူတို့အတွက်ကို အစားအသောက်ဆေးဝါး နေဖို့ထိုင်ဖို့ အဲဒါတွေ အကုန်လုံး သူတို့အတွက်ကို အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားရမယ်။ ဒုတိယ အဆင့်အနေနဲ့ နှစ်ဘက်စလုံးကို ယုံကြည်မှုတိုးလာအောင် လုပ်ပေးရမယ်။ အဲဒီကနေပြီးတော့မှ နောက်တစ်ခါ သူတို့တွေကို သူတို့အိမ် တွေမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ နေထိုင်သွားနိုင်ဖို့ ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ပေးရမှာက ဒါဟာ စစ်မှန်တဲ့သူတို့တွေကို ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်း တစ်ခုဖြစ်တယ်။
(အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့ အီရန်သံမတ် Hossien Kamalian ကို ကျွန်တော်တို့မြစ်မခ သတင်းအေဂျင်စီက ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်)
အောင်ဆန်းစုကြည်၊ မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာများနဲ့ ယုံကြည်ချက်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှု (ဘာသာပြန်) (Oct 26, 2012)
ကျောက်ဖြူမှ မွတ်စလင်မ်ဒုက္ခသည်အချို့ စစ်တွေ ဒုက္ခသည် စခန်းသို့ရောက် (Oct 25, 2012)
နိုင်ထက်ရှိန်(ဟင်္သာတ)သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (Oct 12, 2012)
ရခိုင်ကိစ္စ အမေရိကန်မှာ ဆွေးနွေး (Oct 10, 2012)
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်သံအမတ်ကြီးရဲ့ ရခိုင်ခရီးစဉ် (Oct 3, 2012)
မလေးရှားပြည်သူများမှ ရခိုင်ဒေသ ဒုက္ခသည်များအတွက် RM ၁၀ သန်းဖိုး ရိက္ခာသင်္ဘောပေးပို့ (Sep 27, 2012)
INTERNATIONAL CONFERENCE: ON THE PLIGHT OF THE ROHINGYA:Resolution on Rohingya (ဘာသာပြန်) (Sep 19, 2012)
ဓာတ်အားလိုင်း ဖျက်ဆီးခံရကြောင်း အီရန်ပြောကြား (Sep 19, 2012)
မြန်မာနှင့်အီရန် သံအဆက်အသွယ် စတင် (Sep 11, 2012)
Monks stage anti-Rohingya march in Myanmar (Sep 3, 2012)
This entry was posted on January 17, 2013, in အင်တာဗျူး, ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ‘It’s About Burma’
တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများကို ပြည်သူများ လက်လှမ်းတမီ အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ် … →